Dhibaatooyinka ka taaagan Waddooyinka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dhibaatooyinka ka taaagan Waddooyinka Muqdisho
MUQDISHO, Soomaaliya - Maamulka Gobolka Banaadir ee Madaxtooyada laga magacaabo, ayaa indhaha ka daawanaya dhibaatada canshuur bixiya-yaasha Caasimaddu ku qabaan waddooyinka xiran ee Magaalada Muqdisho, kadib dhagax ay Dowladdu jidadka ku jartay iyo dhiiqo roobabku sababeen oo maamul ka qaada la waayay.
Labadii maalin ee la soo dhaafay ku dhawaad lix gaari oo nuuca xamuulka ah ayaa ku rogmaday waddooyinka Muqdisho, waxayna sababeen khasaare xooggan oo naf iyo maalba leh.
Sida ay sheegayaan Gaadiidleyda Xamuulka, ma jirto waddo caafimaad qabta oo gaaadiidku maro, Maamulka uu hoggaamiyo Cumar Finish iyo Dowladda Federaalka oo saldhigeedu yahay caasimadda ayayna ku eedeeyeen in ay indhaha ka xirteen shiddada ka taagan waddooyinka.
“Muqdisho oo dhan waxa ay noqotay hal waddo oo dhamaan dadkii iyo gaadiidkii nuucyadiisa kala duwan isugu yimaadeen, ma jirto taraafoko kala hagta, gawaarideennuna uma leexan karaan jidadka yaryar oo waa rogmanayaan 40 saac gudahood lix gaari ayaa rogmaday oo ilaa hadda aan la toosin”. Ayuu yiri Axmed Xassan oo ka mid ah wadayasha Xamuulka.
Sidoo kale, wadayaaasha gaadiidka shacabku raaco, sida caasiyada iyo mootooyinka, ayaa si joogto ah cabsho u soo bandhiga, kadib markii ay go’een qaar ka mid ah jidadka magaalada, mana jirto cid wax ka qabata cabashooyinka dad weynaha.
Marka laga yimaado dhibaatada ka jirta jidadka Caasimadda, Qaar ka mid ah xaafadaha Magaalada ayaa qarka u saran in guud ahaan shacabku faarujiyaan, kadib markii loo adkeysan waayay urka biyaha yaalla xaafadaha dhexdooda muddo dheer.
Inta badan dhuumaha qaada qashinka, (Bullaacadaha) ayaa xiran, taas oo sababtay in biyaha roobku dhiiqo ka dhigaan magaalada oo dhan.
Duqa Muqdisho iyo guud ahaan Guddoomiyayaasha degamooyinka Gobolka Banaadir, ayaa indhaha ka daawanaya, qashinka daadsan waddooyinka, dhiiqada iyo biyaha meel kasta yaala ee roobabku sababeen, kuwaas oo ay caan ku noqotay caasimaddu.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Bayle, ayaa dhawaan sheegay in ku dhawaad 15 Milyan oo doolar ay Dowladda Fadaraalka bishii ka soo gasho gobolka Banaadir, taas oo ka dhigan in ku dhawaad 200 oo Malayan ay ka soo xarooto Sanadkii, waxaana la is weydiinayaa waxa lagu qabto iyo halka ay marto lacagta intaas la eg.